ဝေဖာ Waffle | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » ဝေဖာ Waffle	20
Posted by Ma Ma on Aug 2, 2015 in Food, Drink & Recipes | 20 comments
ဒီတခါတော့ မုန့်နဲ့ဧည့်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖာ Wafle လို့ခေါ်တဲ့ ဂျုံ ကြက်ဥနဲ့ အလွယ်တကူ လုပ်စားနိုင်တဲ့မုန့်ပါ။
ကလေးဘ၀တုန်းက တောဘုရားပွဲတွေမှာ လုပ်ရောင်းလေ့ရှိတဲ့ မုန့်နဲ့တူပါတယ်။
ကြက်ဥမုန့် လို့လည်း ခေါ်တာပေ့ါ။
အစိမ်းရောင်ခွက်ကလေးတွေက ချင်တွယ်တဲ့ ခွက်လေးတွေပါ။
အဲဒီလိုခွက်တွေမရှိလည်း ခွက်တစ်ခုခုနဲ့ အဲဒီအချိုးအဆအတိုင်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။
၁။ ဂျုံမှုန့် ၂ခွက်
၂။ ကြက်ဥ ၂လုံး
၃။ သကြား ၂ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
၄။ ဆီ ၁/၃ခွက်
၅။ ထောပတ် အနည်းငယ်
၆။ နွားနို့ ၂ခွက်
၇။ Baking powder ၁လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
၈။ အနံ့ဆီအနည်းငယ် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှုန့်တွေအကုန်လုံးကို ပန်းကန်တစ်ခုထဲထည့်ပြီး နှံ့အောင်မွှေပါတယ်။
ကြက်ဥ ၂လုံးကို ခေါက်ပြီး အရည်တွေအကုန်လုံးကို ရောထည့်မွှေပါတယ်။
ကြက်ဥနဲ့ ရောမွှေထားတဲ့အရည်တွေထဲကို ရောမွှေထားတဲ့ အမှုန့်တွေထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပေးရင် မုန့်နှစ်ရည် ရပါပြီ။
ပုံစံခွက်ကို ထောပတ်အနည်းငယ် သုတ်လိမ်းပေးပါတယ်။
မုန့်နှစ်ရည်ထည့်ကာ အဖုံးပိတ်ပြီး အပူပေးပါတယ်။
သူ့ချည်းပဲလည်း စားနိုင်သလို ရေခဲမုန့်နဲ့စားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
မုန့်ဖုတ်တဲ့ ပုံစံခွက်မရှိလည်း ဒယ်အိုးကို ထောပတ်သုတ်၊ အပူပေးပြီး ခေါက်မုန့်လို အပြားလိုက်လုပ်လည်း ရမယ်ထင်ပါတယ်။
တခုပြောရရင် ပေးထားတဲ့ အချိုးအစားအတိုင်းလုပ်လိုက်တာ ဗမာပါးစပ်နဲ့တော့ အချိုပေါ့နေသလိုပဲ။ About Ma Ma
မြစပဲရိုး says: စားချင်ဖွယ်ပါဘဲ လား မမ ရေ။
ဒီမှာတော့ ဂျုံ နဲ့ သကြား ဆတူ ထား ကြတာမို့ တအားချိုတာ။
အဲဒီလို မုန့်ဖုတ်တဲ့ ပုံစံခွက် တွေ နဲ့ လုပ်မှ အထက်မီး အောက်မီး လို ရပြီး ကြွပ် မှာ ထင်တယ်။
မဟုတ်ရင် တော့ ပန်ကိတ် ကို မျိုး ဖြစ်သွားမယ်။
ပန်ကိတ် လုပ်တာ အဲဒီလို အစပ်မျိုးဘဲ။ :-))
Ma Ma says: Easy Cook ရဲ့ Easy Snack ပေ့ါ။
အဓိက မုန့်ရည်ဖျော်ပြီး စက်ထဲထည့် ခဏစောင့်ရင် ရပြီ။
အရမ်းလွယ်လို့ စိတ်ဝင်စားပြီး လုပ်ကြည့်ဖြစ်တာ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ငယ်ငယ်တုန်းက စားခဲ့ရတဲ့ နိုင်လွန်ဝေဖာသွားသတိရသလို
မုန့်ပုံစံမြင်တော့ မန်းလေးက တရုပ်တန်းမှာစားလေ့ရှိတဲ့
Ma Ma says: ကျမတို့ ငယ်ငယ်က ဘုရားပွဲတွေ ပွဲဈေးတန်းတွေမှာ လုပ်ရောင်းတာ။
အဲဒီစက်ကလေးက လုပ်စားလို့ရတယ်ဆိုလို့ သဘောကျပြီး လုပ်စားကြည့်တာ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီမှာ ပန်ကိတ် လုပ်တာ။
ချိ(စ) သုပ် ခိုင်းမားး
ကာရား သုပ်ခိုင်းမား ရတယ်။
ဒီလို စက် ရှိမှန်း ခုမှသိတယ်။
Ma Ma says: ဒီမှာသာ လုပ်ရောင်းတဲ့သူမရှိတာ။
စလုံးကလူတွေကတော့ အလွယ်တကူ ၀ယ်စားနိုင်မှာပါ။
Ma Ei says: မမ
အဲ့ စက်ကလေးတွေ ပုံစံမျိုးစုံလေ ခုလို ဝေဖာကွက် အသဲပုံ အ၀ိုင်း ပုံစံမျိုးစုံ ၀ယ်ချင်တာ တစ်ပိုင်းသေရော
ခုရက်ပိုင်း (လချီနေပါပီလေ) ရုံးရော အိမ်မှာပါ အလုပ် တော်တော်မအားတာမို့ ဘာမုန့်မှကို မလုပ်ဖြစ်တော့တာ.. လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရတဲ့ဘ၀ ပျော်ရာမှာမနေရ တော်ရာမှာ နေနေရသလိုဘဲ
ဒါပေသိ ခု မမ မုန့်ကလေးတွေ့တော့ ပိုးပြန်ရှင်လာပီရော…
၀ယ်ဦးမှာ အင်ဖော်မေးရှင်းလေး ပေးပါနော်…
Ma Ei says: မမ ရေ
ခုဘဲ super one သွားရင်း wafer, sandwich, donut3မျိုးပါတာလေး တွေ့လို့ ၀ယ်ခဲ့လိုက်ပီ
Ma Ma says: မအိ ပိုးလေး အမြန်ရှင်သန်ခွင့်ရသွားတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
မအိရဲ့ လက်ရာကောင်းတာ သိနေတယ်။ (ကိုယ်တိုင်စားဖူးတယ်လေ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဝီလီတို့အမေကို အဲသည့်လို Snack Maker3in 1 ဝယ်ပေးထားတယ်…
Tray ၃-ခုပါတယ် ၊ ဝေဖာ ဆန်းဒဝစ်ခ်ျ အကင် (Grill Steak) လုပ်လို့ရသတဲ့…
ဆန်းဒဝစ်ခ်ျတော့ လုပ်စားပြီးပြီ … ကျန်တာတွေတော့ မစမ်းရသေးဘူး…
အာဟိ… အန်တီမာမားရဲ့ ဝေဖာပုံကြည့်ပြီး ဒီတပါတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာ လုပ်စားဦးမှ…
Ma Ma says: ဒီစက်လည်း ၃မျိုးလုပ်လို့ရတယ်တော့ပြောတယ်။
ဝေဖယ် (ဝေဖာ) ကတော့ ငယ်ငယ်က အရမ်းကြိုက်ခဲ့တာမို့ အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်လိုက်တာ။
ဟေသီ says: စားချင်စရာ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ်တိုင်သိလို့။ သရေပဲ ကျသွားပါကြောင်း…….
Ma Ma says: အစားအတွက်ဖြင့် အသက်ပင်သေသေ…
အဲ မှားလို့ အစားအတွက်ဆို ကြိုးစားအားထုတ်တတ်တဲ့ ဗီဇရှိရင်ရပြီ ဟေသီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဝေဖယ်ကိုတော့သိတယ် ဝေဖာနဲ့ အမျိုးတော်မယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့လိုစက်ရှိမှ လုပ်စားလို့ ရမှာဆိုတော့ သိပ်ပြီး အထမမြောက်လောက်ဘူး။
အောင် မိုးသူ says: မှတ်မိသေးတယ် စင်ကာပူမှာ အဲ့လို လေးထောင့်မဟုတ်ဘဲ အလုံးလေးတွေ အဲ့လို မုန့်နှစ်ရည်နဲ့ ကြက်ဥကတ်ဆိုပီး လုပ်ရောင်းတာ စားခဲ့ဖူးတယ်။
Ma Ma says: ဟုတ်တယ်။
အဲဒါ စင်္ကာပူမှာ လုပ်ရောင်းတာမျိုး အိမ်မှာလုပ်စားနိုင်တဲ့ စက်ပေ့ါ။
Ma Ma says: ကျမတို့ငယ်ငယ်က လုပ်ရောင်းကြပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ မတွေ့တာ ကြာပြီ။
ရွာသူားတွေ ကြုံကြဆုံကြရင်လည်း လုပ်ကျွေးချင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .စားကောင်းမဲ့ပုံပဲ
Ma Ma says: တခါတုန်းက ချက်ပြုတ်နေတုန်း ရောက်လာတဲ့ အသိတစ်ယောက်က မွှေးနေတာပဲ၊ ဘာတွေချက်နေလဲ လို့ မေးပြီး ကိုယ့်အကြောင်းလည်း သိထားတော့…
တခါတလေ အနံ့ကိုလည်း မယုံရဘူး၊ မွှေးနေပေမယ့် စားကောင်းချင်မှ ကောင်းတာတဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.